Dia Veloma Atoa Durov, ary Misaotra Tamin’izay Natao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2014 19:09 GMT
Taorian'ny herintaona nanjakan'ny tsaho, dia nandroaka ny mpanorina sady Filoha Tale Jeneraliny, Pavel Durov, ihany ireo mpitana ny renivolan'ny Vkontakte, tambajotra sosialin'i Rosia lehibe indrindra. Ao anatin'ny fanapahakevitra hafahafa momba ny raharaha anatin'ny VK, dia nofaranan'ny orinasa androany (fotoana nanoratana ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy) amin'izay lazainy ho noho ny antony teknika ny asan'ny mpanorina azy, ka nilazany fa tsy nofoanan'i Durov mihitsy ny taratasy fialany tamin'ny 21 marsa 2014. Efa nilaza ampahibemaso anefa i Durov fa tsy nihevitra ny hiala amin'ny VK izy, ka nilaza fa misy ampahany fetin'ny lainga iny ary misy ampahany paikady hanosehany ny mpifaninana aminy hihetsika.
Nilaza amin'izao fotoana izao ny Vkontakte fa tsy niverin-dalana tamin'ny fialany mihitsy i Durov. Nilaza tamin'ny fampitam-baovao ny tale amin'izao fotoana, Dmitri Sergeev (ilay lehilahy vao niaro an'i Durov tamin'ny fanodikodinana ny volan'ny orinasa tamin'ny volana marsa teo) fa iray volana izany no lasa tamin'ny nilazan'i Durov tamin'ny filakevi-pitantanan'ny VK ny fikasany hiala, ka mihatra amin'izao fotoana izao ny fialany.
Maro ny fotoana tamin'ny herintaona ny heverina fa efa vita ny fandroahana an'i Durov amin'ny Vkontakte. Isaky ny mitranga ny tahaka izany dia miezaka ny mitazona ny asany ity tanora manampahaizana 29 taona amin'izao fotoana izao tsy mety fehezina ity. Na dia mbola mila fintandremana aza, dia afa-manambara ihany izahay fa tonga eo amin'ny gara fialany i Durov. Tamin'ny herinandro, angamba hiomanany amin'ny vaovaon'ny androany (tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra), dia navoakany fa nanindry ny Vkontakte ny governemanta rosiana hizara ny ango-tahiry (data) ao aminy momba ireo mpandrindra ny Vondrona Euromaidan sy hanakatona ny vondron'i Alexey Navalny miady amin'ny kolikoly ao aminy. Tamin'ireo fotoana roa ireo, dia nilaza i Durov fa nataony niala maina ny manampahefana federaly. Ankehitriny, tonga angamba ny valin-kafatra avy amin'ireo Rosiana mpifehy ny fahefana.
Izao manaraka izao kosa dia ny dikantsoratra manontolo tamin'ny fanambarana nataon'i Durov tamin'ny 21 Avrily 2014.